Satọde, Satọdee 20, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Na nri m n'ụtụtụ a, elu pụtara post nke ahụ dọọrọ uche m, Otu esi edozi ntọala Twitter na-ege ntị. Ozugbo m pịrị gaa na post ahụ, agbanyeghị, enwere m nkụda mmụọ n'ihi na enweghị nkọwa ọ bụla na ịtọlite ​​ezigbo na-ege ntị. Kama, enwere m nzute site na post gbasara otu esi ahazi a Twitter akaụntụ.
Setmepụta akaụntụ Twitter anaghị enye gị nghọta n'ihe ndị folks bụ n'ezie si gbasara gị, akara gị, ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Naanị ihe ị ga - eme bụ inye ndị mmadụ ohere iji gwa gị okwu site a pụrụ iche na-ajụ.
Etu ịtọlite ​​Micro-Blog Listeners
Iji melite 'onye na-ege ntị', ị nwere ike ịga Google ma chọọ okwu ị na-achọ (nke a twitter ihe atụ na-egosi ọchụchọ maka "microsoft ad" na twitter):
saịtị: twitter.com "microsoft ad"
n'ihi na Enyi na enyi:
saịtị: friendfeed.com "microsoft ad"
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzọpụ ụkwụ ma meghachi omume na ndị na-ekwusara gị ozi, ngwaahịa gị, ma ọ bụ akara gị, guzobe Google Alert iji zitere gị ozi ka ọ na-eme. Dịka onye njikwa ahịa ma ọ bụ aha njikwa, enwere m ike ịtọlite ​​ederede ederede na Google Alerts na m ga-aza ozugbo na tweet.
Septemba 20, 2008 na 9:39 ehihie
Daalụ! Ị ga-eche na nke ahụ gaara adịrị ọtụtụ mmadụ anya. Ọ dị ka ha aghọtaghị twitter "n'ezie" ha?
Sep 21, 2008 na 10: 01 AM
I kwuru eziokwu, Jason. Mgbe m hụrụ ndetu na saịtị nke ọzọ gbasara ịtọlite ​​​​onye na-ege ntị twitter mana ọ nweghị ụzọ isi 'na-ege ntị', aghaghị m ide akwụkwọ ozi ahụ!
Sep 21, 2008 na 8: 37 AM
M na-eche mgbe niile ka ụlọ ọrụ m kwuru na Twitter si enwe ike ịchọta m ma zaghachi. Ugbu a amatala m. Daalụ.
Septemba 22, 2008 na 2:46 ehihie
Hi, Douglas .. daalụ maka njikọ ahụ!
Ọtụtụ ndụmọdụ Bet maka ige ntị bụ n'ezie ihe dị na ihe ngosi mmịfe ahụ. N'akụkụ nke mbụ nke ọkwa ahụ, ọ na-ejegharị gị ka esi edozi akaụntụ, ma na ihe ngosi mmịfe ọ na-abanye na nkọwa nke otu esi ege ntị maka ụdị, usoro na nkọwa ndị ọzọ ị nwere ike ịmasị gị site na ebe nyocha ahịa. echiche.
N'ezie ọ na-agwakọta ige ntị na nkwurịta okwu, mana enwere ụfọdụ ndụmọdụ "otu esi ege ntị" na ihe ngosi mmịfe ahụ.
Septemba 22, 2008 na 3:48 ehihie
Daalụ nke ukwuu maka ime ka m mara nke a! Eji m unu abụọ ụgwọ mgbaghara, echere m na m dị mkpụmkpụ. 🙂 Ọ dị m ka m kwesịrị ịlaghachi ma gee ntị!
Septemba 24, 2008 na 2:21 ehihie
🙂 Enweghị nchekasị! Ọ tụrụ m n'anya mgbe mbụ m gụrụ ya - mana emesịa gwuo ya n'ime ebe ike. Ihe dị mma. Beth bụ onye na-ezisa ozi ọma nke nwere amamihe!!
Septemba 28, 2008 na 1:51 ehihie
Ụzọ dị mfe karị bụ iji TweetBeep.com nke n'onwe ya na-eji Summize mbụ na http://search.twitter.com. M na-eji TweetBeep nyochaa ọtụtụ mkpụrụokwu dị iche iche gụnyere ụdị okwu ụgha niile nke aha ikpeazụ m! 🙂
Ọzọkwa maka ndị nwere mmasị m kwadebere slide maka ihe Okwu mmalite na Twitter nke m napụtara na Nzute Twitter nke ndị ọchụnta ego webụ Atlanta na nso nso a.
Sep 29, 2008 na 9: 17 AM
Mike, nke ahụ bụ nnukwu nchọta! Ọ jọgburu onwe ya na Tweetbeep enweghị ụdị njirimara ozugbo maka iwere okwu ọchụchọ ndị ahụ. Ọ bụrụ na otu awa na-aga na mmadụ na-ekwu maka ụlọ ọrụ gị - ọ nwere ike ịbụ akaha!
M gbakwunyere ya na njikọ kwa ụbọchị ụnyaahụ, n'agbanyeghị! Daalụ maka ijide!
Blog Bloke - Inyere gị aka ịbụ onye blọgụ ka mma
Disemba 10, 2008 na 6:06 mgbede
Ọ masịrị m ịdenye aha na ntanetị nchọta Twitter (akụkụ aka nri elu) dị ka nke a:
N'ụzọ dị otú ahụ, anaghị m eche gburugburu maka ozi-e sitere na Google alerts. Enwere m ike ịnweta ozi ahụ oge ọ bụla m họọrọ.
Disemba 10, 2008 na 7:11 mgbede
Oge gị enweghị atụ, Bloke! Nke ahụ bụ nke m biputere taa!
Disemba 10, 2008 na 9:24 mgbede
Always a nwunye nwunye .. Ọ dịghị mgbe a nwunye 😉